တရုတ် အသံပညာ အောက် ဖုံးအုပ်ထားပါ စက်ရုံ - အခမဲ့ နမူနာ မ - ဂျင်ချိ UNITE ကို ပုံ စက်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက်
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ဆေးထိုး မှို > နေအိမ် အသုံးအဆောင် မှို > အသံပညာ အောက် ဖုံးအုပ်ထားပါ
ဒါ ဟုတ်တယ် က ကcoustics အောက်ခြေ အဖုံး sကmple ထုတ်လုပ်ခဲ့သည် က က မှို ၏ က အောက်ခြေ အခွံ ၏ က အိမ်ထောင်စု အသံ thကt ငါတို့ compကny ကူညီသည် ဖောက်သည်များ ရန် လုပ်ငန်းစဉ်။ ဒါ ကcoustics အောက်ခြေ အဖုံး ဟုတ်တယ် chကrကcterized က အလွန် မြင့်သည် ကppeကrကnce လိုအပ်ချက်များ ကnd က အများကြီး ၏ ထုတ်ကုန်များ thကt တိုက်ဆိုင် နှင့်အတူ eကch oကr. အဖြစ် က ရလဒ်, က ဟုတ်တယ် eကsy ရန် ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဂဟေ လိုင်းများ အပေါ် က ကppeကrကnce surfကce စဉ်အတွင်း injectiအပေါ် အဆာ, ဒါပေါ့ က ဟုတ်တယ် အလွန် ခက်ခဲသည် ရန် ကdjust က injectiအပေါ် ပုံသွန်း mကchine.
ဤသည်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှဖောက်သည်များအားလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ကူညီပေးသောအိမ်သံ၏အောက်ခြေအခွံ၏ပုံသဏ္bottomာန်မှထုတ်လုပ်သည့်အောက်ခံအဖုံးနမူနာဖြစ်သည်။ ဤအသံပိုင်းအောက်ခြေအဖုံးသည်အလွန်မြင့်မားသောအသွင်အပြင်လိုအပ်ချက်များနှင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုတိုက်မိသည့်ထုတ်ကုန်များစွာဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်ဆေးထိုးခြင်းအားဖြည့်စဉ်အတွင်းမျက်နှာပြင်ပေါ်ဂဟေဆော်သောလိုင်းများထုတ်လုပ်ရန်လွယ်ကူသဖြင့်ဆေးထိုးခြင်းပုံသွင်းစက်ကိုညှိရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ ၀ န်ထမ်းအားလုံး၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကြောင့်ပြoneနာများအားလုံးကိုတစ် ဦး ချင်းစီကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပြီးမှိုထုတ်လုပ်မှုမှာချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ နမူနာကို ၀ ယ်သူထံပို့လိုက်သည်နှင့်၎င်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်စစ်ဆေးချက်ကိုလွန်စွာမြန်ဆန်စွာပြုလုပ်နိုင်ပြီးဖောက်သည်မှချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။
အတိုချုပ်နိဒါန်း: အသံပိုင်းအောက်ခြေ ဆေးထိုးမှိုအားဖြင့်ပုံသွင်းအဖုံး
အစိတ်အပိုင်းအတွက်နည်းပညာပြissueနာ: ခက်ခဲ မှိုတပ်ဆင်ခြင်း, ခိုင်ခံ့မှိုဖွဲ့စည်းပုံ, သံမဏိခိုင်မာ, မျက်နှာပြင်နိုက်ထရိတ်, အုပ်စုခွဲ လိုင်း, ခက်ခဲအဆာ, ခက်ခဲစက်ညှိနှိုင်းမှု။
ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှု ချောအစိတ်အပိုင်းမှမှိုဒီဇိုင်း။ ကျနော်တို့ဖြစ်နိုင်သမျှနည်းပညာပြissueနာကျော်လွှားနှင့် အောင်မြင်စွာနမူနာပုံသွင်း။ နမူနာပရိဘောဂစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ဖောက်သည်လွန် နမူနာကျေနပ်မှု။
hot Tags:: အသံပညာ အောက် အဖုံး, တရုတ် ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းသူ, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, စျေးပေါသော ဝယ်ပါ လျှော့စျေး, အနိမ့် စျေးနှုန်း, ဈေးနှုန်း စိတ်ကြိုက်, In ကုန်ပစ္စည်း အခမဲ့ နမူနာ